Rentiers - यो हुनुहुन्छ? आर्थिक मामलामा, यो एक ऋण रूपमा वा जमानत एक प्रतिशत रूपमा हस्तान्तरण पैसा देखि आधारभूत आय प्राप्त गर्ने व्यक्ति हो।
शब्द "निवेशक" को व्यापक अर्थ नगद को रूप मा एक निवल छ जो एक व्यक्ति हो। एकै समयमा उहाँले ब्याज मा बसोबास। साथै, निवेशक आय उत्पन्न जो अत्यधिक तरल अचल सम्पत्ति (व्यापार, जमानत वा भूमि) को मालिक, हुन सक्छ। यस्तो व्यक्ति को अस्तित्व को एक सम्भव स्रोत रोयल्टीहरू को आविष्कार लागि इनाम, साथै छन्।
अर्को शब्दमा, काम बाट केही आय प्राप्त गर्ने व्यक्ति, यो rentier छ। एकै समयमा रोड सम्पत्ति अंतर रहन्थ्यो गर्न सकिन्छ (बिल, ऋण, अचल सम्पत्ति र यति मा। डी)।
Rentiers - यो हुनुहुन्छ? म श्रम लाइभ गर्दैन नगर्ने, तर वैध आय एक हुँ। यस्तो व्यक्ति को लागि प्राप्त पैसा को मात्रा सधैं यसलाई आफ्नो राजधानी कसरी प्रभावकारी व्यवस्थापन निर्भर छ।
rentiers को प्रश्न मा - यो छ जो, तपाईं निश्चय यसलाई इक्विटी उत्पन्न आफ्नो पैसा हुन्छ जो छ भनेर भन्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, अचल सम्पत्ति, तिनीहरूलाई बाहिर भाडामा, मासिक स्थिर आय दिन्छ।
आफ्नै सम्पत्ति लगभग कुनै स्वतन्त्र नियन्त्रण लिन्छ कि निवेशक देखि Rentier फरक। उहाँले वा निष्क्रिय आय ल्याउन कि, वा व्यवस्थापन व्यवसायीक हालतमा विश्वास केहि खरीद।
Rentiers - जो अर्थशास्त्रियों को दृष्टिकोणबाट छ? कुनै सरल जवाफ छ। यसरी, Veblen वास्तविक उत्पादन प्रक्रियामा केही परजीवी rentiers थियो। Bukharin मान्छे को यो समूहमा क्रेडिट अर्थव्यवस्था को विकास मा एक ठूलो भूमिका तोकिएको।
व्यक्ति एक निष्क्रिय आय गर्न अधिकार हुनुपर्छ?
एक निश्चित परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईं धेरै अवस्था पूरा गर्नुपर्छ। धेरै मान्छे को सपना काम अवस्थित राजधानी मा ब्याज मा आराम गर्दा बाँच्न जाने छैन कदर। एक rentier बन्ने भएकोले? आफ्नो सपना गर्न अग्रिम मा मुख्य कठिनाई - मूल राजधानी पर्याप्तता।
महिनाको महिना गर्न पेशा जस्तै मानिसहरू आफ्नो आय मा सानो परिवर्तनहरू छन्। rentier आय को परिमाण केही कारक प्रभावित छ। तिनीहरूमध्ये निम्न छन्:
- स्थिति शेयर बजार मा विकास;
- लाभकारी को स्तर ; व्यापार को
; अचल सम्पत्ति बजार मा स्थिति -
- आर्थिक अवस्था देश मा विकास।
रूस मा एक निवेशक कसरी बन्न? तपाईं प्रारम्भिक स्तर मा कम से कम आर्थिक साक्षरता गर्न आवश्यक हुनेछ। साधारण मान्छे जीवनको आफ्नो बाटो परिवर्तन र आफूलाई लागि पैसा काम गर्न आवश्यक छ।
निवेशक जहाँ तिनीहरूले सबैभन्दा ठूलो फिर्ती ल्याउन भनेर यस्तो तरिकाले आफ्नो सम्पत्ति लगानी गर्न जान्न आवश्यक छ। अचल सम्पत्ति, जमानत वा बहुमूल्य धातु - उदाहरणका लागि, राम्रो छ? या शायद यी सबै सम्पत्ति बराबर अनुपात मा आफ्नो हात हुनुपर्छ?
निवेशक कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने साझा खरिद गर्न मा एक विचार गर्नुपर्छ लगानी सिक्का। उहाँले यस्तो स्टक रूपमा आधारभूत अवधारणाहरु बुझ्नुपर्छ।
हामी सानो सुरु गर्न आवश्यक छ। सबै को पहिलो, तपाईंले आफ्नो पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्छ। यो अन्त गर्न, तलब प्रतिशत दस तीस गर्न बचत को रूप मा बायाँ गर्नुपर्छ। साथै, यो एक वित्तीय पत्रिका छ आवश्यक छ। तिनीहरूले जो सबै दैनिक आय र व्यय रेकर्ड गर्न मा एक साधारण नोटबुक बन्न सक्छ। आवश्यक र बनाउने व्यक्तिगत वित्तीय योजना।
प्रारम्भिक चरण मा, एक सानो स्रोत, निष्क्रिय आय प्राप्त गर्न अनुमति हुनेछ जो सिर्जना गर्नुहोस्। एकै समयमा हरेक महिना यसलाई वृद्धि गर्न खोजिरहेका।
बुद्धिमानीसाथ पैसा व्यवस्थापन गर्न सिक्नुहोस्। उदाहरणका लागि, अनावश्यक उपभोक्ता ऋण र यति मा लिने छैन, उपयोगिता मा सुरक्षित। डी विकल्प आधुनिक संसारमा प्रशस्त। तिनीहरूलाई कुनै पनि तिमी धेरै सानो रकम, कुनै 1,000 भन्दा बढी rubles सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ इन्टरनेट परियोजनामा लगानी को संभावना छ। यस मामला मा ब्याज यसलाई अत्यन्तै उच्च प्राप्त गर्न सम्भव हुनेछ।
को rentier को आय को स्रोत
हालै, रूस को राजधानी मा त्यहाँ कतै काम गर्न सक्षम छन् जो धेरै मानिसहरू हुन्। आफ्नो आय तिनीहरूले भाडामा लागि मास्को अचल सम्पत्ति को भाडा प्राप्त। यो प्रति वर्ग मीटर लागत बढ्दै छ भन्ने तथ्यलाई देखि भयो। मास्को मा अचल सम्पत्ति को मूल्य को स्तरमा युरोप संग समात्नु। राजधानी मा दुई वा तीन अपार्टमेन्ट को होल्डरलाई छ गर्नेहरूले आफ्नो भविष्य बारे चिन्ता छैन। एक मात्र भाडामा तपाईं आराम जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। अचल सम्पत्ति भविष्यमा सुनिश्चित गर्न सबै भन्दा राम्रो ग्यारेन्टी छ। यस मामला मा, कोठा व्यापार उद्देश्यका लागि साथै आवास को लागि भाडामा गर्न सकिन्छ।
एक सभ्य आय र बैंक जम्मा प्राप्त। तर, खाता मा रकम प्रभावशाली हुनुपर्छ। यस मामला मा, ब्याज आरामदायक अस्तित्व लागि पर्याप्त कमाए। यो मुद्रास्फीति को प्रभाव अन्तर्गत हुन्छ जो राजधानी मूल्यह्रास बारेमा उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ।
त्यहाँ स्टक र ठूलो कम्पनीहरु को बन्धन बाट लाभांश मा जीवित rentiers छन्। नियम, यो अर्थव्यवस्था को कम्पनीको कच्चा माल क्षेत्रहरु छ।
केही rentier कारण एक लाभदायक व्यवसाय मा लगानीको समयमा गरे एक आरामदायक जीवन सुरक्षित छ। अब तिनीहरू केवल यो योगदान को एक उच्च प्रतिशत प्राप्त।
त्यसैले तपाईं एक rentier बन्न निर्णय गर्नुभएको छ। यो ज्ञान, ठोस कार्य प्राप्त साथै भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। निष्क्रिय आय मा बस्दा सपना ल्याउन क्रममा, तपाईं सही दिशा मा सार्ने राख्न आवश्यक छ।
16 उमेर वर्ष मुनिका बच्चाहरु लागि मासिक भत्ता: आयाम
कसरी Webmoney वालेट हटाउन?
कहिले र कहाँ सिक्का बेच्न - केही सुझावहरू
पेन्सन बचत। आफ्नो "रगत" कहाँ लगानी गर्न
Nikolai Maclay: छोटो जीवनी
अचल सम्पत्ति को विषय मा घोषणा भर्न: जो, जब तिनीहरूले के गर्नुपर्छ किन
पेस्कोभ मा सबै भन्दा राम्रो होटल: तस्बिर र समीक्षा
घरमा बर्फ केक बनाउन
परियोजना को प्रतिफलको आन्तरिक दर
अस्थाइ बन्दि अपहरण को कब्जा विपरीत। अपराधी कोड को लेख 126 र आपराधिक कोड को लेख 206
सांस्कृतिक केन्द्र "Mitino": विवरण, ठेगाना
कसरी विन्डोज7र Windows मा सी ड्राइव विस्तार गर्न 8
योजना सबै भन्दा राम्रो वेब होस्टिंग साइटहरु छनौट
सिरियल "पाँचौं अभिभावक": अभिनेता र भूमिकाको, कथा
संचार चेतन र inanimate प्रकृति। चेतन र inanimate प्रकृति को सम्बन्ध